Fizalaotra - Hiavaka ny fankalazana ny faha 40 taonan'ny fikambanana
Publié mars 4, 2019 par Book News
Homarihina mandritra ity taona ity ny faha 40 taonan’ny Fikambanana Fizalaotra.
Feno 40 taona ny Fizalaotra
Hetsika maro no hoentina hanamarihana ny faha 40 taonan’ny fikambanana Zanaka Ampielezana Terak’Alaotra na ny Fizalaotra amin’ity taona ity. Efa mandeha amin’izao ny fifaninana manamboatra sary famantarana na ny logo sy ny teny faneva amin’ny fankalazana ny faha 40 taona.
Hosokafana amin’ny fomba ofisialy eny amin’ny Paon d’Or Ivato ny lanonana ny faha 6 Aprily 2019 izao. Hisy ihany koa ny fitsanganan’ny mpikambana sy ny olona avy any Alaotra rehetra amin’ny faha 27 Aprily 2019. Hitohy amin’ny alim-pandihizana lehibe ihany koa izany ny faha 28 Jona 2019.
Ankoatra izay dia hisy ny fitetezana ireo distrika telo toa an’i Ambatondrazaka sy i Amparafaravola ary i Andilamena mandritra ny telo volana. Hetsika izay natao handraisan’ny mponina any an-toerana anjara amin’ny fomba hampandrosoana ny Faritra Alaotra. Ho famaranana ny hetsika dia hisy ny lohabary an-dasy karakarain’ny Fikambanana atao eto Antananarivo. Fotoana izay handravonana ireo hevitra voangona nandritran’ny fitetezana ireo distrika telo.
Namory mpanao gazety ny Fizalaotra. cc: Toria Dimbiniaina
Marihina fa sehatra telo no tena niompanan’ny Fikambanana nandritra izay efapolo taona izay toa ny sehatra politika sy ny fampandrosoana ary ny sosialy. Tsy miandany amina firehan-kevitra politika kosa ny Fikambanana.